ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အဘယ်အရာကိုရာသီခွင်သင်္ကေတပြခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲတွင် Do ရန်
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: သြဂုတ်. 10 2020 |5မိဖတ်ပြီးသား
ပထမဦးစွာရက်စွဲများအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့အဘို့အစဉ်အမြဲအာရုံကြော-ယူပြီးဖြစ်ကြောင်း. သင်သည်အရက်စွဲရှိသည်စိတ်လှုပ်ရှားင်, နှင့်ဘာ၏ဖြစ်နိုင်ခြေလာရန်, သင်မူကား, ကောင်းသောအထင်မြင်အောင်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်. တစ်ဦးကောင်းထင်မြင်အောင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုတခြားသူတစ်ဦးခံစားရပေလိမ့်မည်ကြောင်းရက်စွဲတစ်ခုစီစဉ်ကိုဆိုလိုသည်, ဒါပေမယ့်သင်သေးသူတို့ကိုအကြောင်းအများကြီးမသိရပါဘူးသောအခါအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ကို? သင်သည်သူတို့၏ရာသီခွင်သည်နိမိတ်လက္ခဏာကိုသိလျှင်, သင်တို့ကိုစုံလင်ခြင်းနေ့စွဲစီစဉ်ထားကူညီကြောင်းအသုံးချဖို့ကြိုးစား. အပေါ်ဖတ်ရန်:
သင် Aries နှင့်အတူနေ့စွဲသွားနေတယ်ဆိုရင်, ဒါကြောင့်အရေးယူမှု-လူများပြည့်ကျပ်နေသောဖြစ်သွားကြောင်းသေချာပါစေ. တစ်ဦး Aries အလွန်ရှည်လျားနေတုန်းထိုင်နေသောမခံမရပ်နိုင်, လူအပေါင်းတို့နှင့်အချိန်များတွင်တစ်ခုခုကိုလုပ်နေဖို့လိုအပ်. အပြင်မှာတစ်ဦးပြင်းထန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုများကိုရှောင်ကျဉ်လှုပ်ရှားမှု Doing, တောင်တက်သို့မဟုတ်စက်ဘီးနှင့်တူ, သူတို့အဘို့အအလုပ်ဖြစ်နိုင်. အတွင်းမှာနေထိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်, မိုးလုံလေလုံကျောက်တောင်တက်ကြိုးစား. သင်သည်အကူးအပြောင်းတွင်သို့မဟုတ်မည်သည့်တစ်နေရာတည်းတွင်အချိန်အများကြီးမသုံးချင်ဘဲအလျင်အမြန်ရက်စွဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကနေနောက်သွားသို့မဟုတ်သူတို့သည်အစာရှောင်စိတ်ဝင်စားမှုဆုံးရှုံးရပါလိမ့်မယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ – ရက်စွဲပင်ကျော်မီ!
သင်က Taurus နှင့်အတူနေ့စွဲသွားနေတယ်ဆိုရင်, သူတို့ကအာရုံကိုအုပ်ချုပ်သောနိမိတ်လက္ခဏာင်ကိုသိရ, ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အာရုံထိတွေ့ဆက်ဆံမည်ကိုဘာမှမလုပ်ဘဲအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်တယ်. ငွေရတတ်သောသူအစားအစာများရှိကြောင်းanice စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုသွားပါ, တစ်ဦးစပျစ်ရည်ကိုအရသာတက်ရောက်မည်, ညဉ့်ကခုန်ဖြုန်း, တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေပွဲမှသွား. သင်သွားလေရာရာ၌, Taurus ဇိမ်ခံချစ်သောသူကြောင့်ပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်. တစ်ဦးကိုမြေကြီးနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခြင်း, သူတို့နေသမျှကာလပတ်လုံး bug တွေအများကြီးပတ်ပတ်လည်မျှမရှိသကဲ့သို့အိမ်ပြင်anice ပျော်ပွဲစားရှိခြင်းစိတ်ထဲမထားပါဘူး, ဒါကြောင့်သင်ကလမ်းကြောင်းကသွားလျှင်, အချို့သော citronella ဖယောင်းတိုင်ကိုရောက်စေ.
သင်က Gemini နှင့်အတူနေ့စွဲသွားနေတယ်ဆိုရင်, အေးမြတစ်နေရာရာမှာသူတို့ကိုယူ, ရှောင်တခင်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွသူတို့ကိုစောင့်ခန့်ကလူတွေအများကြီးရှိ, နှင့်သင်သွက်စကားပြောဆိုနိုင်မည့်နေရာများ. သူတို့သည်အလျင်အမြန်ဘာသာရပ်များကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါအတူအကြောင်းအရာအသစ်များအလင်းနှင့်လိပ်ကိုသိမ်းဆည်းထားပါ. သူတို့ကဆူညံသို့မဟုတ်ယ့်ကိုအလုပ်ရှုပ်နေမယ့်မည်သည့်အရပ်မှစိတ်ထဲမထားပါဘူး, ကလပ်နဲ့တူ, တကယ်တော့တူ. သူတို့ကသူတို့စွန့်စားသောအရာတို့ကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်, သို့သော်ဤနိမိတ်လက္ခဏာကိုထိုသူတို့သည်အမှန်တကယ်ထက်ပိုစွန့်စားင်ထင်သည်, ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့နှစ်သိမ့်ဇုန်ပြင်ပဝေးလွန်းသူတို့ကိုမယူကြဘူး.
သင်ကကင်ဆာနှင့်အတူနေ့စွဲသွားနေတယ်ဆိုရင်, သူတို့အကျွမ်းတဝင်ကြောင်းကိုတစ်နေရာရာမှာကိုရောက်စေ, တစ်နေရာရာသူတို့ရှေ့မှာဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်သူတို့သိရ. သူတို့ဟာသူတို့အသက်သာတယ်လို့ခံစားမိစေရန်အကျွမ်းတဝင်ပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်ဖွင့်ခွင့်ပြု. တစ်ဆိတ်ငြိမ်စားသောက်ဆိုင်တွင်ဖွယ်ရှိသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားပြုလုပ်နိုင်သည်, သူတို့နှစ်သိမ့်စားနပ်ရိက္ခာဝတ်ပြုပြီးအစားအခက်ခဲကုလားထိုင်၏ကျိန်းဝပ်ရာရှိသည်, အထူးသဖြင့်ဆိုရင်. သင်တို့နှင့်အတူသက်သာဖြစ်လာဖို့အချိန်များများရှိသည်ဒါကြောင့်လည်းအများကြီးသင်၏နှစ်ဦးနှောင့်အယှက်မစားပွဲထိုးကိုပြောပြပါ, နှင့်သင်တို့၏နှစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှားမှုအဆက်သွယ်နိုင်သည်.
သင်ကလီယိုနှင့်အတူနေ့စွဲသွားနေတယ်ဆိုရင်, ဒီဒရာမာချစ်သောသူသောလက္ခဏာသက်သေဖြစ်, ဒါကြောင့်ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်ပြဇာတ်ရုံကိုသွားစမ်းကြည့်. သင်ကရုပ်ရှင်သွားလျှင်, ကကြယ်တစ်ပွင်နှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်တောက်င်သေချာအောင်, သင်ကဇာတ်ရုံမှသွားလျှင်, ဒါကြောင့်အခုထွက်ခေတ်အစားဆုံးပြပွဲဖွင်သေချာအောင်. သူတို့ဟာအတွက်လူအစုအဝေးနှင့်အတူခံစားလို, ဒါကြောင့်သင်သွားလေရာရာ၌, ဒါကြောင့်ပူပြင်းတဲ့အစက်အပြောက်ပါစေ. သူတို့မယ့်သင်တို့နှင့်အတူစူပါ flirty ဆိုရင်, ဒါပေမယ့်လူတိုင်းကသင်နှင့်အတူအဆက်အသွယ်လာ, အနည်းငယ်ငြူစူသောစိတ်ကိုပြသအခမဲ့ခံစားရ. သူတို့ကတကယ်တူ.
သင်က Virgo နှင့်အတူနေ့စွဲသွားနေတယ်ဆိုရင်, သိပ်ကြီးသို့မဟုတ် flashy ဘာမှမလုပ်ကြပါဘူး, ထိုသူတို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုဆူညံသို့မဟုတ်အလုပ်များမယူကြဘူး. ဒါကြောင့်သူတို့ကသူတို့ရဲ့အကြံအစည်ကြားနိုင်သည့်နေရာတွင်တစ်ဦးတိတ်ဆိတ်သောရာအရပ်ဖြစ်စေ. သူတို့ကအရမ်းလက်တွေ့ကျတဲ့င်, သင် flamboyant ဘာမှလုပ်လို့လျှင်ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ, သင်ကထင်ဘယ်လောက်ရင်ခုန်စရာနေပါစေ. Virgo ကျန်းမာရေး၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်, ဒါကြောင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့အစားအစာကိုအမှုဆောင်တစ်ဦးစားသောက်ဆိုင်တွင်ကြိုးစား, သို့မဟုတ်သူတို့နှင့်အတူအားကစားရုံကိုသွား. သင်လျှင်မြန်စွာသူတို့ရဲ့လုံခြုံမှုသက်သာရုံသက်သာသေချာအောင်လုပ်ပါ, အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့အလောင်းကောင်အကြောင်း, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုအချို့သောစိတ်အားထက်သန်စွာချီးမွမ်းပေးဆောင်.
သင်က Libra နှင့်အတူနေ့စွဲသွားနေတယ်ဆိုရင်, အနုပညာရပ်တစ်ခုပြတိုက်မှသူတို့ကိုယူ, အနုပညာပြခန်း, သို့မဟုတ်အနုပညာလက်ရာပြပွဲ. ဒီအနုပညာဆိုသည့်စကားရပ်ကိုအများဆုံးကိုတန်ဖိုးထားသောလက္ခဏာသက်သေဖြစ်. သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူအနုပညာတစ်ခုခုပြုနိုင်သည်, တစ်အိုးခွက်ဖန်ခွက်သွားတူဒ​​ါမှမဟုတ် glassblowing စတူဒီယိုမှ. သူတို့ကသင်နှင့်အတူတစ်ခုခုဖန်တီးတဲ့လုပ်ရပ်မွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်. သင်သည်အစအဟောင်းမှအသစ်သို့သွားစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်, မြို့ထဲတွင် trendiest ပွဲချင်းပြီး, ကစားသောက်ဆိုင်တဆိုင်ဖွင်ရှိမရှိ, ကလပ်, သို့မဟုတ်ပန်းခြံ. တဦးတည်း-on-one အာရုံစိုက်တူ libra, ဒါကြောင့်သင်ကလူတွေဝိုင်းရံနေတာပါရင်တောင်, သူတို့အပေါ်မှာသင်၏မျက်စိတို့ကိုစောင့်ရှောက်.
သင်က Scorpio နှင့်အတူနေ့စွဲသွားနေတယ်ဆိုရင်, မှောင်မိုက်သောအလင်းရောင်နှင့်အတူနေရာတွေကိုကပ်. သူတို့ကမှောင်မိုက်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့င်, ဒါကြောင့်ဘယ်သူမျှမနေ့ကိုရက်စွဲများ. သူတို့ကအရမ်းညဥ့်အခါကုလားအုတ်ငှက်နိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်နှောင်းပိုင်းရက်စွဲစတင်ရန်အခမဲ့ခံစားရ. သူတို့ကသိပ္ပံဘာသာကြိုက်, ဒါကြောင့်သင်သိပ္ပံပြတိုက်ကြိုးစားနိုင်ပါ, လူများတို့သည်အများဆုံးသွားကြပြီ, သူတို့သင်နှင့်အတူလုံး​​ဝတယောက်တည်းသာဖြစ်ရနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်တစ်ချိန်က. သူတို့ကအစအသက်တာ၏မဲမှောင်ဘက်ခြမ်းနှင့်မညီကြောင်းဘာသာရပ်များနှင့်တူ, ဒါကြောင့်သင်တစ်နေရာရာမှာလိင်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သူတို့ကိုယူနိုင်လျှင်, သေဆုံးခြင်း, သွေးနှင့်ယုံသို့မဟုတ်, သူတို့ဖြစ်ကောင်းဝမ်းမြောက်နှင့်အတူ squeal လိမ့်မယ်.
သင်က Sagittarius နှင့်အတူနေ့စွဲသွားနေတယ်ဆိုရင်, တစ်ဦးစွန့်စားမှုမှပွင့်လင်းဖြစ်. ဒီနိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခု whim အပေါ်အမှုတို့ကိုပြုရတာကိုနှစ်သက်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်ဖြစ်ကောင်းစီစဉ်ထားသမျှအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်မည်မဟုတ်. သင်သည်အဆင်ပြေထွက်စတင်ပါလိမ့်မယ်, ထိုအခါမူကား, တခြားနေရာ veer, ဒါကြောင့်အတူလှိမ့်. Sagittarius အခြားယဉ်ကျေးမှုများနှင့်နိုင်ငံများကိုချစ်သောသူ, ဒါကြောင့်ထူးခြားဆန်းပြားဟင်းလျာတွင်လုပ်ကျွေးတဲ့စားသောက်ဆိုင်ကိုသူတို့ကိုယူ, နှင့်သင်တဲ့ခရီးစဉ်ကိုယူနိုင်လျှင်, ထိုသို့ပြု. ဒါကြောင့်အနီးအနားရှိင်နှင့်သင်နာရီအနည်းငယ်နေထိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်, သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးသည်လေယာဉ်ပေါ်မှာခုန်နှင့်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ကူး, သူတို့စီးနင်းတက်ပါတယ်. အစွန်းရောက်အရာတစ်ခုခုလည်းအလုပ်လုပ်နိုင်, လေထီးခုန်တူ.
သင်က capricorn နှင့်အတူနေ့စွဲသွားနေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်အစဉ်အလာကြောင့်ပါစေ. ညစာစားပွဲနှင့်ရုပ်ရှင်ကဤနိမိတ်လက္ခဏာနှင့်အတူ-အဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကသူတို့ရဲ့နှစ်သိမ့်ဇုန်ပြင်ပတွန်းခံရမကြိုက်ပါဘူး, သူတို့ကရှိပြီးသားကောင်းစွာသိအဘယ်သို့ပြုစေလို. သူတို့အဘို့အပုံမှန်အတိုင်းသည်အဘယ်သို့မှကပ်ထားပါနဲ့အရူးကနေဝေးဝေး. သင်ဘယ်မှာစာရေးအောင်မြင်သော၏ညစာစားပွဲပါတီသူတို့ကိုယူနိုင်လျှင်, အရေးကြီးသောလူဖြစ်ရကြမည်, သောသင်တို့၌အချို့သောအလေးအနက်အချက်များကိုဂိုးသွင်းလိမ့်မယ်. သူတို့ဟာလူမှုရေးလှေကားကိုတက်လူတို့နှင့်အတူ hobnob မှကိုချစ်.
သင်သုံးလုံးအနီးကပ်အတူနေ့စွဲသွားနေတယ်ဆိုရင်, သင်တတ်နိုင်သမျှအတိုင်းဖွယ်ရာတစ်မူထူးအောင်. ထိုနိမိတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့်သူတို့ပုံမှန်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ချင်ပါတယ်ဘာမှမှကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုချစ်တော်မူ၏, ဒါကြောင့်အဖြစ်ဝေးသင်တို့၏သက်သာဇုန်ပြင်ပသင်တတ်နိုင်သလောက်တွန်းအားပေး. သူတို့ကအုပ်စုတစုရက်စွဲမှာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်, ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အရှောင်တခင်စောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားပါဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးသင်နှင့်အတူမိတ်ဆွေများဖြစ်လိုသောအများအားဖြင့်ကြောင့်. Eco-friendly တဲ့နေရာတွေကိုသွားပါ, ပြန်လည်အသုံးပြုမှုအပေါ်ကြီးမားတဲ့, သို့မဟုတ်သင်အတူတကွအချို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသောအလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်မည့်, အမှိုက်သရိုက်များကောက်နေတူ, တစ်ဦးဟင်းချိုမီးဖိုချောင်မှာလုပ်အားပေး, တစ်ခုသို့မဟုတ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုညစာစားမယ့်.
သင်က Pisces နှင့်အတူနေ့စွဲသွားနေတယ်ဆိုရင်, ထိုနိမိတ်စူပါရင်ခုန်စရာကြောင်းကိုငါသိ၏, တခြားအချက်တွေထက်ပိုပြီးဖြစ်နိုင်, ဒါကြောင့်သူတို့မဆို sappy မူအယာများနားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်. သင် serenaded င်နှင့် string ကို quartet ကုန်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ဘို့သင့်ကိုလိုက်ပါသွားဘယ်မှာတစ်ဦးကစိတ်ကူးယဉ်ညစာသူတို့ကိုချစ်ချင်ပါတယ်တစ်ခုခုဖြစ်. Pisces ကိုရေကိုချစ်မ, ဒါကြောင့်သင်ရေအမြင်များကိုရပါလိမ့်မယ်အဘယ်မှာရှိစားသောက်ဆိုင်တဆိုင်ကိုသွားနိုင်ပါတယ်. သူတို့ကလည်းဂီတကိုချစ်မြတ်နိုး, ဒါကြောင့်တစ်ဦးဖျော်ဖြေပွဲကြိုးစား, ထိုဆင်ဖိုနီ, သို့မဟုတ်ကခုန်ထွက်သွား. သူတို့ကယ့်ကိုကျွန်တော့်ကိုသင်အနီးကပ်ဖြစ်ချင်တယ်. Oddball ရွေးချယ်မှု? အဆိုပါတိရစ္ဆာန်ရုံ. သူတို့ကတိရစ္ဆာန်တွေကိုချစ်.